အဆိုပါ Green Lantern |
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမျှလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာတွန်းစာအုပ်သူရဲကောင်းများကိုချစ်. နှစ်တွေ, our heroes have jumped out of our comic books into films, ဗီဒီယိုများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း. အွန်လိုင်း slot နှစ်ခုဂိမ်းလောကီသားတို့သည်အကာတွန်းစာအုပ်သူရဲကောင်းများရဲ့ဒီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထဲကကျန်ရစ်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး. ရလဒ်အနေဖြင့်, Nyx DC ကရုပ်ပြတူနာမဖြင့် DC ကရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်သူရဲကောင်းတဦး၏ဂုဏ်အသရေအတွက် Green Lantern slot ဂိမ်းတီထွင်ခဲ့သည်.
ထို Green Lantern slot ၏ရေးသားသူအကြောင်း
Nyx DC ကရုပ်ပြရေပန်းစားနေတဲ့ developer များအဘို့မိဘကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် — NextGen. ဒါဟာပစ္စုပ္ပန် slot ကအကောင်းဆုံးပေါက်အပိုဆုဆိုက်ကိုတဦးဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောတို့တွင်နှစ်အတွင်းကာတွန်း-based ဂိမ်းတွေအများကြီးဖန်တီးထားပါတယ်.
အဆိုပါ Green Lantern ငါးရက်ကြောင့်မှားယွင်းဂုဏ်ယူကြောင်းအကောင်းဆုံးပေါက်အပိုဆုဆိုက်ကိုဖြစ်ပါသည်, လေးတန်းနှင့်ငါးဆယ် optional ကို paylines တစ်ဦးစုစုပေါင်း. သင်သည်သင်၏ကံတက်ကြောင်းခံစားရလျှင်, သင်အတွက်တက်ကြွစွာ paylines ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချဖို့လွတ်လပ်မှုမှာ အကောင်းဆုံးပေါက်အပိုဆု ဆိုက်ကိုဂိမ်း.
ဒီဂိမ်း၏ဒီဇိုင်းကာတွန်း-စာအုပ်ဒီဇိုင်းများကိုသင်သတိပေးမယ်လို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. နောက်ခံအတွက်စစ်တိုက်မြင်ကွင်းတစ်ခုအမြဲပိုပြီးစွန့်စားမှုနှင့်ပျော်စရာအဘို့ပြိုင်ကားသင့်ရဲ့ adrenaline စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒီဂိမ်းထဲမှာရိုင်း t ကိုတစ်ဦးအနီးကပ်တက်အမြင်ဖြစ်ပါသည်သူ Green Lantern လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ. အဆိုပါကြဲဖြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းသည်သူ၏အထူးအခွင့်အာဏာကိုပေးတော်မူ၏သောလက်စွပ်ဖြစ်ပါသည်. ရိုင်းကိုသာ slot ကဂိမ်း၏ဒုတိယနှင့်စတုတ္ထရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်နှင့်ကသင့်ရဲ့ပေါင်းစပ်နှစ်ဆ.
ဒီဂိမ်းအတွက်ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်အပိုဆုလောင်းကစား features တွေနှင့် Ring ကိုအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်. The Bonus Bet feature is used to activate the ring features and it has its own special addition to your reward. Sinestro - လက်စွပ် feature ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းနှင့်သူ၏ nemesis အကြားတစ်ဦးရန်ပွဲမှတက်စေပါတယ်. မိမိအရှုံးနိမ့်သင်တို့အဘို့အငယျဆုံးသောဆုလာဘ်ဆိုလိုပေသည်နေစဉ်ကားပေါ်မှာများအတွက်အောင်ပွဲသင်တို့အဘို့အကြီးမားတဲ့ဆုကြေးငွေကိုဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.
You will find the slot havingasufficiently decent gameplay, ပါဝင်ပျော်စရာ-Factor အပေါ်ပျမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူသို့သော်သင့်ခြေချောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါသည်.